Cabdiweli Gaas oo ka hadlay sida uu u arko isbedelka ku dhacay hogaanka dowlada Somalia – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdi balaaran oo uu hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ka dib markii ay magaalada Muqdisho kaga qeyb galeen doorashadii madaxweynaha cusub ee Somalia.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay waajib ahayd in Dawladda Puntland ay qayb ka ahaato isbedelka Doorasho ee Soomaaliya, isla markaana ay ka qayb gasho, kor joogtaysana isbedelka socda.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa shegay in isbedelka doorasho ee Soomaaliya uu yahay isbedelkii loo baahnaa isla mar’ahaantaana ay Puntland ku kalsoon tahay doorashada loo doortay Madaxweynaha DFS Mudane. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
“Waxaan muddo todobaada ku maqnayn magaalada Muqdisho oo ay ka dhacaysey isbedelkii doorasho ee madaxweynaha Soomaaliya, Dawladda Puntland oo ka mida Dawladaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya waajib baynagu ahayd inaan tagno, ka qayb galo, korjoogtayno, isbedel kaas oo saamayn weyn dabcan ku yeelanaya itijaaha siyaasadeed ee Soomaaliya, markaa Puntland muhiim bay ahayd inay joogto oo ay ka qayb gasho.
“Isbedelka maanta ka dhacay Soomaaliya, waa isbedel khayr-qaba oo ay ku kalsoon yihiin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan, doorashada Madaxwweynaha DFS Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wanaag bay u tahay Puntland, Soomaaliyana guud ahaan waxaan filayaa sidaa soo kale’’ ayuu yiri Madaxweynaha Dawladda Puntland.
Gaas ayaa mar labaad uga tacsiyeeyey shacabka Puntland iyo Ummada Soomaaliyeed meel kastay joogaan geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Madaxweynihii hore ee Dawladda Puntland General. Cade Muuse Xirsi Boqor.